Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Psalms 139
Nepali New Revised Version, Psalms 139
1 हे परमप्रभु, तपाईंले मेरो पारख गर्नुभएको छ, अनि मलाई चिन्‍नुहुन्‍छ।
2 तपाईंले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्‍नुहुन्‍छ, टाढ़ैबाट मेरो विचार बुझ्‍नुहुन्‍छ।
3 तपाईंले मेरो बाहिरी जवाइ र मेरो सुताइ स्‍पष्‍टसँग जान्‍नुहुन्‍छ, र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईं परिचित हुनुहुन्‍छ।
4 मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै, हे परमप्रभु, तपाईंले त्‍यो सम्‍पूर्ण रूपले जान्‍नुहुन्‍छ।
5 तपाईंले मलाई अगि र पछि घेर्नुभएको छ, र आफ्‍नो बाहुली ममाथि राख्‍नुभएको छ।
6 यस्‍तो ज्ञान मेरो निम्‍ति साह्रै आश्‍चर्यपूर्ण छ, यो प्राप्‍त गर्न मेरो निम्‍ति अति गाह्रो छ।
7 तपाईंका आत्‍माबाट म कहाँ अलग्‍ग जान सक्‍छु? अथवा तपाईंको उपस्‍थितिबाट म कहाँ भाग्‍न सक्‍छु?
8 म आकाशमा गएँ भने, तपाईं त्‍यहाँ हुनुहुन्‍छ, गहिराइमा आफ्‍नो ओछ्यान बनाएँ भने, त्‍यहाँ पनि तपाईं हुनुहुन्‍छ।
9 प्रभातको पखेटामा उड़ेर समुद्रको पल्‍लो किनारमा गएर बसें भने पनि,
10 त्‍यहाँ पनि तपाईंको बाहुलीले मलाई डोर्‍याउनेछ, र तपाईंको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्‍नेछ।
11 यदि म भनूँ, “अँध्‍यारोले मलाई छोप्‍नेछ, अनि प्रकाश मेरो चारैतिर रातको अन्‍धकार हुनेछ,”
12 तापनि अन्‍धकार तपाईंको निम्‍ति अँध्‍यारो हुनेछैन, रात त दिनको उज्‍यालोजस्‍तै चम्‍कनेछ, किनभने अन्‍धकार तपाईंको निम्‍ति ज्‍योतिजस्‍तै हो।
13 किनकि तपाईंले नै मेरा भित्रका अङ्ग-प्रत्‍यङ्ग बनाउनुभयो, तपाईंले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्‍नुभयो।
14 म तपाईंको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भयानक र अद्‌भुत रीतिले बनाइएको छु। तपाईंका कार्यहरू अद्‌भुत छन्‌, र त्‍यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्‍दछु।
15 जब अदृश्‍यमा म बनिँदैथिएँ, मेरो रचना तपाईंबाट लुकेको थिएन। अनि जब म पृथ्‍वीको गहिराइमा रचिँदैथिएँ,
16 तपाईंका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे। मेरो निम्‍ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईंको पुस्‍तकमा लेखिएको थियो। त्‍यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए।
17 हे परमेश्‍वर, मेरो निम्‍ति तपाईंका विचारहरू कति बहुमूल्‍य छन्‌! तिनको सङ्‌ख्‍या कति महान्‌ छ!
18 तिनलाई मैले गन्‍नुपरेमा, ती बालुवाका कणहरूभन्‍दा बढ़ी हुनेथिए। जब म बिउँझन्‍छु, तब म तपाईंसँगै हुन्‍छु।
19 हे परमेश्‍वर, दुष्‍टहरूलाई विनाश गर्नुभए कति असल हुनेथियो! हे रक्तपिपासु मानिस हो, मबाट दूर होओ!
20 तिनीहरू तपाईंको विरुद्धमा दुष्‍ट नियतले बोल्‍छन्‌, र तपाईंका शत्रुहरूले तपाईंका नाउँको दुरुपयोग गर्छन्‌।
21 हे परमप्रभु, तपाईंलाई घृणा गर्नेलाई के म घृणा गर्दिनँ? र तपाईंको विरुद्धमा उठ्‌नेहरूलाई, के म हेलाको दृष्‍टिले हेर्दिनँ?
22 तिनीहरूका निम्‍ति मेरो हृदयमा घृणाबाहेक अरू केही छैन, म तिनीहरूलाई मेरा शत्रु ठान्‍दछु।
23 हे परमेश्‍वर, मलाई जाँच्‍नुहोस्‌, र मेरो हृदयलाई जान्‍नुहोस्‌। मलाई जाँच्‍नुहोस्‌, र मेरा चिन्‍ताहरूलाई जान्‍नुहोस्‌।
24 हेर्नुहोस्‌, ममा कुनै खराब चाल छ कि, र मलाई अनन्‍तको मार्गमा डोर्‍याइदिनुहोस्‌।
Psalms 138 Choose Book & Chapter Psalms 140